Xnxx: nri 5 nwere ike inyere gị aka iru orgasm - teles relay
Xnxx: Nri 5 Nke Puru Inyere Gị Aka Iru Orgasm
By bryanekobe	 emelitere ikpeazụ June 2, 2021
Nsogbu Orgasm na-egbochi gị inwe mmekọahụ? Orbịaru orgasm ka bụụrụ gị nrọ? Otu n’ime ihe kpatara na ị naghị enwe mmekọahụ n’ike nwere ike ịbụ ihe dị n’ime efere gị.
Ihe ọ bụla nwere ike ịdaba na ezigbo mmekọahụ na-adabere n'ọtụtụ dị ukwuu n'ọbara gị, nke nri ị na-eri na-enyere ma ọ bụ na-egbochi. Nri na - enyere ọbara n’ahụ aka na - abawanye agụụ mmekọahụ gị.
Lee nri 5 nwere ike inyere gị aka iru orgasm
Ọ bụ ezie na ị kwesịrị ịkpachara anya ka iku ume gị tupu ịmalite ịbanye mgbe ị na-eri ihe mmụba mmekọahụ a, ị na-eri galik na mgbe niile nwere ike ime nnukwu mgbanwe na ike mmekọahụ gị.
Unere bụ akwa nri mmekọahụ. Unere dị mma maka ume n'akwa n'ihi na ha bụ ọgaranya nke vitamin B nke na - agbanwe carbohydrates ka ọ dị ike. Ọ na - enyere ahụ gị aka ịme homonụ mmekọahụ dị ka testosterone. Iri banana na awa ole na ole tupu ime ihe nwere ike inyere gi aka iru orgasm.
#MalluAunty #PunjabiAunty #MarathiMulgi na -eri #ASMR #Egg…
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
I nwere ihe ọzọ mere ị ga-eji hụ chọkọletị n'anya, karịchaa chocolate. Nnyocha na-egosi na ụmụ nwanyị na-eri chocolate kwa ụbọchị nwere ndụ mmekọahụ na-enye afọ ojuju karị. Chocolate nwere chemical a na-akpọ phenethylamine nke na-akpali mmetụta nke izu ike na obi ụtọ. Ọ na - ewepụta serotonin nke na - eme ka ọnọdụ dị mma ma belata nrụgide, na - akpali agụụ maka kọntaktị anụ ahụ ma belata ihe mgbochi.
Mkpụrụ niile, ọkachasị ndị bara ọgaranya na vitamin C, nwere ike ịdị mkpa maka afọ ojuju mmekọahụ. Ahụ chọrọ vitamin C ka akụkụ ahụ mmekọahụ bụrụ nke a ga-eji na-akụzi nke ọma. Nnwale gosiri na iri vitamin 500 ruo 1 nke vitamin C kwa ụbọchị na-abawanye ọnụ ọgụgụ na ogo spam e mepụtara. N'etiti mkpụrụ osisi ndị dabara n'ụdị a bụ mkpụrụ osisi citrus, karịsịa kiwi, nwa currant na strawberries.
Mkpụrụ osisi de mer
Ọ bụrụ na ị nwere ụdị mmiri ị ga-egwu na mmiri, ị ga-amalite ịmalite mmasị ha dịka ha na-ekwe nkwa libido na-enweghị ntụpọ. Ma ọ bụ azụ ma ọ bụ oporo, ha na-ebu ọgwụ mmekọahụ dị ịtụnanya. Azụ jupụtara na omega-3 fatty acids, nke na - eme ka metabolism gị dị elu ma na - eme ka ị nwee ọdịdị. Ọ na - akpali dopamine nke na - eme ka ụbụrụ nwee obi ụtọ. Na mgbakwunye, o nwere vitamin B nke jikọtara ya na ọmụmụ. Oysters, nke a maara maka ngwa aphrodisiac, bụ akụ zinc kacha baa ọgaranya, nke na-edozi prostate ma na-akpali mmepụta nke testosterone na ụmụ nwoke.
Xnxx: Nke a bụ 5 ihe mere ị ga - eji malite inwe mmekọahụ a (BDSM).
Edemede a pụtara izizi na: https://www.afrikmag.com
bryanekobe 2080 posts 0 comments
“Boy Djinné” onye mmeri nke ụwa gbapụrụ? - Nwa okorobịa Africa
Didier Drogba na-eme mkpebi dị mkpa
Xnxx: Lee uzo ise iji nwete orgasm n’ebughi aka gi
Xnxx: Nke a bx ezi ihe n to akwxkwq 4 nwere mmekqrx na abali mbu
Kedu ihe butere ngagharị iwe ndị ọrụ ugbo n'okpuru ntụpọ zuru ụwa ọnụ? M ...